Amaphupho ngamakhadi okukweleta nokuthi amele ukuthini – iAfrika
Ukuphupha ngamakhadi esikweletu kumela ukukwazi kwakho ukuthola noma ukwenza okuthandayo empilweni ngaphandle kokusebenza kanzima noma ukukhathazeka kakhulu. Kukhombisa izinga lokukhululeka kwakho ngokuba namandla, amathuba noma ubumnandi.
Ukusebenzisa ikhadi lesikweletu kusho ukuthi wena noma okuthize ngawe kukwazi ukwenza noma yini ukufeza injongo ngaphandle kwezinkinga.
Ukuphupha ngabantu ababi benekhadi lesikweletu kungasho izinto ezingathandeki ngawe njengomuntu ezenza kube nezenzakalo ezimbi empilweni yakho ngokukhetha kabi, noma ukwenza izinto ngokweqile.
Ukuphupha ngokulahlekelwa yikhadi lakho lesikweletu kumela imizwa yakho yokungakwazi ukwenza okuthandayo empilweni, noma ukuzizwa ukhawulekile.
8 thoughts on “Amaphupho ngamakhadi okukweleta nokuthi amele ukuthini”
Uma uphupha uyoboleka imali bank
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngebhange
NgoJune sifihle umkhulu wami. Sigeze ngoJuly. Namhlanje ngilele emini ngiphuphe ngilele embhedeni wakhe uma ngiwundlula ngathola izikhwama ezimbile Zemali ezinemali. Ngabe lokho kusho ukuthini?
Nalu ulwazi esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/, https://iafrika.org/isho-ukuthini-imali-emaphusheni-akho/
Uma uphupha umdeni wala uthandana khona udla inyama ehlaza yesikopo senkomo emnyama kodwa wena ma usidla uthole ukuthi inyama yakhona ibolile koshu ukuthini
Ukuphupha udla inyama eluhlaza, nalu ulwazi esinalo: https://iafrika.org/amaphupho-ngenyama-engaphekiwe/
sanibona kusho ukuthi ukuphupha ujahwa inkomo ebomvu but ingakufici ucashe bese iyahamba
Ephusheni lakho ububhekene nesimo esiyingozi kodwa waphunyula wagcina ungalimalanga, unqobile. Nalu olunye ulwazi esinalo lapho uphupha usinda ezimweni ezinzima: https://iafrika.org/amaphupho-okunqoba/